Static eliminator Anti-static ụgbọ ala static osisi Anti-static ọgọ static osisi Static keychain J10SBT
Udo ụgbọala na-eme ihe atụ na-ewepu mgbochi osisi eserese na-egbochi mgbochi katuunu ụgbọ ala Keychain 0903SBT
Nnukwu kọntaktị nnukwu: Ala dị larịị, ebe kọntaktị ahụ buru ibu, a na-etinyekwa isi ihe ngwa ngwa.
Ọdịdị eserese: Ọ nwere ike ọ bụghị naanị iwepụ ọkụ eletrik dị egwu, kamakwa iji ya chọọ mma.
Na-adaba adaba iburu: ìhè na obere ọdịdị, kwesịrị ekwesị maka iburu igodo ụgbọ ala.
Enweghị mmebi nke agba ahụ: Ntu ụdị kọntaktị na ala, na-enweghị nsọtụ na nkuku, ọ gaghị emebi agba ahụ.
Ekwensu katuunu udi: Ọ nwere ike ọ bụghị naanị iwepụ static ọkụ eletrik, kamakwa emit ụda na ìhè, nke ike-eji maka ochicho mma.
Enweghị mmebi nke agba ahụ: Kọntaktị na ala dị ka arc, na-enweghị akụkụ na nkuku, ọ gaghị emebi agba ahụ.